Google achọghị ka ị jiri okwuntughe ndị ọzọ na njedebe nke afọ | Gam akporosis
Google na-arụ ọrụ ka ị ghara iji okwuntughe na gam akporo
Ọ bụrụ na anyị kwuru na Twitter ọ na-arụsi ọrụ ike Na usoro ozi niile a ọ na-etinye n'ime ngwa ya, Google bụ ihe ọzọ anaghị akwụsị ihe ọhụrụ ma melite ahụmịhe nke iji ngwa ya na sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka nke anyị niile maara site na gam akporo.
Si anya ya, gị gam akporo ama nwere ike tufuo okwuntughe n’otu afọ a. Google's Project Abacus, nke na-eji usoro ụfọdụ iji nyochaa njirimara gị dabere na usoro ojiji gị pụrụ iche, ga-akụ gam akporo ngwa ngwa n'afọ a.
Onye isi Google maka ATAP (Advanced Technology na Projects), Daniel Kaufman, nyere nkọwa ndị ọzọ na Project Abacus na Google I / O onye ogbako ogbako izu gara aga. Ugbua atụ anya na 2015, isi ihe elekwasị anya na Project Abacus bụ iji mee ka ngwaọrụ gị nwee ike tufuo ya inwe ibido okwuntughe na PIN maka nyocha.
Newzọ ohuru iji banye maka gam akporo na-enye gị ohere izere okwuntughe na jiri usoro dịka ebe, pịnye ọsọ na olu iji mata onye ị bụ. Google ekpughela ugbu a na Project Abacus nọ na-anwale ule na mahadum 33 gafee steeti 28 na United States kemgbe afọ gara aga ma ugbu a ọrụ ahụ agaala na ule ndị a iji weta ya na ngwa gam akporo na-esote afọ a.
Ọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú ahụ nọ n'ọrụ na ndabere ma na-anakọta data na ezigbo oge site na isoro nke bụ otu na-ekpebi akara ziri ezi gị. Ndị injinia nọ n’òtù ọchụchọ Google mepụtara API a akpọrọ ntụkwasị obi, nke a ga-anwale na ụlọ akụ ahọpụtara na mbido June. Kaufman kwusiri ike na ha na-arụ ọrụ iji nye ndị ọrụ gam akporo ikike a na njedebe nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-arụ ọrụ ka ị ghara iji okwuntughe na gam akporo
Android N na-enye ohere windo Chrome n'akụkụ abụọ nke ihuenyo gbawara agbawa
Twitter na-anwale ọnọdụ abalị na ụdị nke gam akporo